Global Voices teny Malagasy · Fitantaran’olon-tsotra mikasika ny Azia Atsinanana tamin’ny Oktobra 2011
Azia Atsinanana · Oktobra, 2011
Tantara mikasika ny Azia Atsinanana tamin'ny Oktobra, 2011
Shina13 Oktobra 2011
Mametraka an-tsarintany ny tondra-drano any Thailandy
Thailandy10 Oktobra 2011
Amin'izao fotoana anoratana izao, 252 no efa maty ao Thailandy noho ny oram-batravatra naharitra roa volana izao. Faritra maro ao Bangkok, renivohitry ny firenena, no efa difotry ny rano tondraka. Natsangana ny Sarintany An-tserasera hanaraha-maso ny fizotry ny tondra-drano sy hampilaza ny olona izay mety ho fiitatry ny voina.
Indonezia : Fipoahana baomba fanaovana sorona ny tena tao aminà Fiangonana Protestanta
Indonezia06 Oktobra 2011
Fiangonana protestanta ao Solo, afovoan'i Java ao Indonezia no tratran'ny fipoahana fanaovana sorona ny tena [andro maro lasa izay]. Mpampiasa Twitter tao Solo sy tany an-kafa no nandefa ny fiaraha-miory tamin'izy ireo sy naneho ny fahadisoam-panantenany mikasika iny tranga nampalahelo iny. Indreto ary misy fanehoan-kevitra avy amin'ireo mpisera twitter tamin'ny...
Shina06 Oktobra 2011
Japana06 Oktobra 2011
Myanmar: Naaton'ny Filoha ny Fananganana Tohodrano
Myanmar (Birmania)05 Oktobra 2011
Nanaitra ny maro ny nataon'ny fitondran'i Myanmar tamin'ny baiko fampiatoana ny fananganana ilay tohodrano niteraka andihevitra ho valin'ny fanoherana sy ny fanangonan-tsonia nataon'ny tambanivohitra sy ny fiarahamonim-pirenena. Adikan'ny mpanoratra ato amin'ny Global Voices mydaydream ho antsika ny vaovao amin'ny teny Birmana sy ny domberina azo tamin'ny fampiatoana ny tetikasa
Libia02 Oktobra 2011
Zhang Zhaozhong dia toy ny Thomas Friedman Sinoa: Profesora fanta-daza iray miaraka amin'ny PLA National Defense University, Contre-Amiral ao amin'ny tafika an-dranomasina PLA ary mpanao tatitra momban'ny raharaha ara-miaramila ho an'ny CCTV sy ny haino aman-jery hafa, manana mpankafy marobe ary malaza amin'ny fandaminana ny fifanolanana eo anivon'ny miaramila izay...